အဓိကစာမျက်နှာ: စိတ်ကူးများ — HunterThinks.com အဓိကစာမျက်နှာ: စိတ်ကူးများ — HunterThinks.com
DualDonate သင်သည်ကောင်းသောအကြောင်းတရားများကိုထောကျပံ့နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများထဲကငါ့ကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်ပါဝါပေးသည်. တစ်ဦး DualDonate မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်, ထက်ဝက်ပိုက်ဆံဆင်းရဲမွဲတေမှုမှငါ့ထွက်ပေါက်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တစ်ဝက်ပိုက်ဆံကောင်းသောအရာကို support.
shared အကြှနျုပျ၏စိတ်ကူးများရာပေါင်းများစွာ; အဓိကပြဿနာအကြောင်းကိုရေးသားဖို့ကြိုးစားနေ
လွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်, I have shared hundreds of my ideas ranging from physics to climate change to computing to business to law to labor to domestic violence to social reform to photography. The ideas I shared were only the ideas that I already had written inaformat that was easy to convert to . ..
အဆိုတော် Marilyn, ဘေ့စ်ဘောလေ့လာဆန်းစစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူး
အဆိုတော် Marilyn ဘေ့စ်ဘောအသိပညာရှိပါတယ်, တင်ဆက်မှုကျွမ်းကျင်မှု, သူမယောက်ျားဆွဲဆောင်. သုံးလုံးကိုပေါင်းစပ်: ဘေ့စ်ဘော၏သူမ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူဗီဒီယိုများစေနဲ့ကြော်ငြာမှတဆင့်ငွေရှာ, ပံ့ပိုးကူညီခြင်းကို, နှင့်ထောက်ခံချက်.
ပုဂ္ဂလိကပိုင် OOP ပြဋ္ဌာန်းရန်မှမထီမဲ့မြင်, CNCO
ပါမောက္ခ. ဒါဝိဒ်သည် Wilkins Corporation နှင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီများအပေါ်